Peptides-ka Oysterku Xaqiiqdi Ma Hagaajin Karaa Shaqaynta Ragga?
1. Dulmarka Oyster
2. Waa maxay Oyster Peptide?
3. Hawlaha Oyster Peptide iyo Faa'iidooyinka
4. Maxay yihiin Faa'iidooyinka loo yaqaan 'Oyster Peptide' Marka la Barbardhigo Alaabada kale ee Waxbarista Galmo?
5. Sidee loo qaataa budada Oyster peptide? Qiyaasta Oyster peptide?
6. Saameynta Oyster Peptide Side?
7. Codsiga budada Oyster Peptide?
8. Erayada ugu dambeeya
Oyster, xayawaan badeed taas oo ah isha caan ka ah budada soosaar oyster, waxay dad badani u ahayd macaan badan tobanaan qarniyo. Waxaad cuni kartaa ceyriin ama waad karin kartaa. Meelkastoo aad doorato, hilibka lohodku wuxuu jirkaaga siin doonaa noocyo nafaqo leh. Nafaqooyinka waxaa ka mid ah borotiinka, dufanka caafimaadka leh, macdanta iyo sidoo kale fiitamiinnada.
Wax kale oo lagu daro hilibkan ayaa ah inay ku yar tahay kalooriyeyaasha.
Waxaa jira alaabooyin badan oo laga soo saari karo hilibka lohod, oyster peptide oo ka mid ah. Dib-u-eegistaan, waxaan diirada ku saari doonaa diirada loo yaqaan 'oyster biopt peptides' iyo saameynta ay ku leedahay shaqada lab, iyo faa'iidooyinka kale ee imaan kara.
Oyster peptide waa dheeri dabiici ah oo laga soo qaatay borotiinka hilibka lohodka iyada oo loo marayo teknolojiga tillaabooyin tiro badan. Peptide-ka wuxuu hodan ku yahay zinc, kaalshiyam, taurine, iyo sidoo kale fiitamiinnada A, B1, B2, B5, C, D iyo E. Sidaasoo kale, waxaa loo isticmaali karaa cunto caafimaad ama cunto shaqeynaya. Waxay leedahay faa'iidooyin caafimaad oo badan dadka dhexdooda, gaar ahaan ragga qaba arrimaha caafimaadka galmada.
Peptides-ka noolaha ee loo yaqaan 'bioyst peptides' waxay leeyihiin awood bayooloji oo sarreysa marka la barbar dhigo waxyaabaha kale ee loo yaqaan 'oyster'. Ka sokow, peptide lohod-ka wuxuu leeyahay shaqo jir ahaan muhiim u ah. Wali si ka sii wanaagsan, oo ka duwan waxyaabaha loo yaqaan 'loyster', budada loo yaqaan 'peystide peptide' waxay leedahay dhadhan fiican oo ma leh ur adag.
Hawlaha Oyster Peptide iyo Faa'iidooyinka
Oyster peptide wuxuu leeyahay howlaha soo socda iyo faa'iidooyinka soo socda:
Taurine-ka loo yaqaan 'oyster peptide' wuxuu kor u qaadi karaa siilka dheecaanka qofka. Intaa waxaa sii dheer, soosaarka oyster-ka ayaa ka hortegi kara ururinta xaqiiqda dhexdhexaadka ah ama baabi'inaysa dufanka ku ururay beerka. Labada hawloodba waxay ku caawiyaan beerka shaqadiisa nadiifinta.
Hagaajinta shaqada galmada
Peystide 'oyster peptide' waxay hodan ku tahay arginine, iyo waxyaabo zinc ah, oo labaduba muhiim u ah caafimaadka galmada qofka. Waxay caawisaa soosaarka hoormoonka galmada, oo ay kujiraan progesterone, testosterone iyo estrogen.
Waxay taageertaa quruxda
Markaad qaadatid budada loo yaqaan 'peystide peptide' si joogto ah, waxaad arki doontaa inaad noqon doonto mid aad u qurux badan ama qurux badan maalinba maalinta ka dambaysa. Tani waa sababta oo ah waxay jirkaaga siisaa nafaqooyin kor u qaada dheef-shiidka maqaarkaaga, taasoo ka dhigaysa mid caafimaad qaba oo si fiican u wanaagsan.
Ka sokow, budadaani dabiiciga ah waxay leedahay qaybo kor u qaadda nabaad-saarka melanin maqaarka. Natiijo ahaan, codka maqaarkaagu wuu fiicnaanayaa oo noqdaa mid aad u sii badan. Intaa waxaa sii dheer, iodine iyo tryptophan oo ku jira peptide-ka ayaa ka dhigi kara timahaaga inay noqdaan madow, sidaas awgeedna aad u qurux badan.
Nidaam difaaca oo wanaagsan
Caafimaadka habka difaaca jirkaaga ayaa muhiim u ah samaqabkaaga maxaa yeelay waa kan ka ilaaliya jirkaaga caabuqyada iyo cudurada kala duwan. Zinc wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee nidaamka difaacaagu u baahan yahay inuu ku xoog badnaado shaqadiisa.
Nasiib wanaag, oyster peptide wuxuu jirkaaga siiyaa qaddarka saxda ah ee zinc kaasoo nidaamka difaaca jirka uu ubaahanyahay inuu kusii socdo oo fayraska iyo bakteeriyada khatarta ah gelinkaro. Intaa waxaa sii dheer, peptide-ku wuxuu kiciyaa wax soo saarka thymulin ee qanjirka 'thymus'. Soo-saarkii soo-saareyaasha tayroodh waxay u horseedaysaa si ka wanaagsan T-unugyada iyo nidaam-hoosaadka T4 Helper, taas oo keenta habdhiska difaaca xoog leh.
Qaar ka mid ah cudurada iyo xaaladaha caafimaad ee aad ka fogaan karto qaadista lohod peptide waxaa ka mid ah:
Indhaha oo liita
Waxay ka hortagtaa dhaawac xag-jir ah
Soosaareyaasha Oyster, oo ay ku jiraan peptides-ka, waxay leeyihiin antioxidant-ka ka ilaaliya unugyada jirka iyo unugyada da'da-xawaareynta cadaadiska qiiqa.
Oyster peptide sidoo kale waxay ka kooban tahay amino acids, kaas oo, marka lagu daro hagaajinta shaqada beerka, ay hor istaagi karto isu-tagga aashitada lactic. Intaa waxaa sii dheer, aashitadu waxay ka caawisaa kahortagga daalka jirka iyo maskaxda. Tani waxay ka caawineysaa qofka inuu helo xoog badan oo uu yeesho maskax furfuran ka dib xaalad walaac badan ama jiro.
Oyster peptide faa'iidooyinka u leeyahay ninka
Ragga qaba arrimaha shaqada galmada si weyn ayey uga faa'iideysan karaan oyster peptide. Tan waxaa ka mid ah ragga qaba cillad aan caadi ahayn, kacsi la'aan, qanjirka 'prostate' ama 'hypoplasia', oo ka mid ah cudurrada iyo xaaladaha kale ee ragga. Oyster peptide wuxuu hagaajin karaa caafimaadkooda galmada.
Awoodda ka dambeysa awoodda hagaajinta caafimaadka galmada ee loo yaqaan 'oyster peptide' waa oodhkeeda sare ee zinc, iyadoo la tixgelinayo in oysterku uu yahay isha ugu qaniga badan ee zinc. Waxyaabaha zinc ee ku jira "yster "ayaa toban jeer ka sarreeya hilibka cas.
Cilmiga ahaan, zinc waxaa loo cadeeyay inuu sare uqaado heerka testosterone bilaashka ah ee qofka. Dhinaca kale, yaraanshaha zinc waa sababta ugu weyn ee keenta dhibaatooyinka galmada ragga sida cillad aan kacsi lahayn. Tani waa sababta oo ah waxay leeyihiin zinc ku filan si ay u soo saaraan testosterone si ay u kiciyaan una ilaaliyaan jilayaasha labaad ee lab. Badanaa, ragga qaba testosterone hoose waxay la kulmaan libido hooseeya iyo waxqabadka galmada.
Marka lagu daro zinc, soo-saarka lohodku sidoo kale wuxuu ku jiraa xaddi badan oo fitamiin D ah, nafaqo kale oo sidoo kale ka caawisa jirka ninku inuu sameeyo testosterone ka badan. Waxay sidoo kale wanaajisaa xoogga murqaha iyo qaab dhismeedka.
Ka sokow, peystide loo yaqaan 'oyster peptide' waxay hodan ku tahay arginine, raadinta walxaha sidoo kale selenium, dhammaantoodna waxay door muhiim ah ka ciyaaraan wax soo saarka shahwada. Natiijo ahaan, nin adeegsada sheygan lohodkan wuxuu soo maray bacrin koritaanka.
Marka, markuu nin qaato lohod peptide, heerarka testosterone iyo heerarka wax soo saarka shahwada ayaa kordha, taas oo lagu hagaajinayo caafimaadkiisa galmada. Sababta oo ah awooda guud ee jirka iyo kororka testosterones, ninku wuxuu awood u leeyahay inuu yeesho libido dhakhso leh oo dheeri ah. Sidoo kale, wuxuu joogsan karaa kacsanaan waqti dheer.
Marka laga reebo galmada iyo itaal darrida, sidoo kale waa daaweyn wax ku ool ah xaaladaha ragga sida qanjirka 'prostate' iyo hypoplasia xubinta taranka. Taasi waa sababta wax soo saarka oyster, gaar ahaan lohod peptide, loogu isticmaalo ragga dhexdooda boqolaal sano - u-qaadista caafimaadka galmada.
Saamaynta hal qaadasho ee qiyaasta peystide peystide waxay socon kartaa toddobo ilaa toban maalmood. Taas macnaheedu waa in ninku qasab ku ahayn inuu qaato kabitaanka maalin kasta si uu uga faa'iideysto faa'iidadiisa horumarinta galmada. Qiyaastii 12 saacadood ka dib markii uu qaatay kabitaanku, ninku wuxuu bilaabaa inuu dareemo firfircooni badan iyo rabitaan galmo galmo.
Oyster peptide faa'iidooyinka loogu talagalay haweenka
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee loo yaqaan 'peystide peystide' ayaa ah guud ahaan xoojinta jidhka. Sidaas oo kale, markay haweeney la kulanto kala-dhan ama tabar-darri umul-qaadasho ah, waxay dareentaa xoog.
Intaa waxaa sii dheer, sida ragga oo kale, haweenku sidoo kale waxay la kulmaan caafimaad galmo oo fiican ka dib markay qaataan peystide oyster. Jirka dumarku wuxuu kaloo soo saaraa testosterones laakiin ugxan-sidaha.
Si kastaba ha noqotee, dumarka caadadu si caadi ah ayey u yareeyeen heerarka hoormoonka, sidaa darteedna, waxay la kulmaan libido hooseysa iyo qallalan siilka.
Nasiib wanaag, bixinta dheeraadka ah ee zinc ee loo yaqaan "oyster peptide" waxay kor u qaadeysaa heerka testosterone-ka haweenka ee menopausal-ka. Natiijooyinka tan waa kor u qaadida galmada iyo siilka sifiican loo '. Sidaas oo kale, waxay awood u yeelan doontaa inay ku raaxeysato galmada si ka wanaagsan.
Waa maxay Faa'iidooyinka loo yaqaan 'Oyster Peptide' marka lala barbar dhigo badeecadaha kale ee kobcinta galmada?
Si ka duwan sidii hore xoojinta galmada Waxyaabaha loo yaqaan 'Oyster peptide' ma laha waxyeelo maxaa yeelay waa wax dabiici ah. Ka sokow, qofna maahan inuu qaato maalin kasta, sida ay ula mid tahay waxyaabaha kale ee kor u qaadista galmada. Saamaynta hal qadar peystide ah oo loo yaqaan 'peystide dose' waxay socon kartaa ilaa toddobo ilaa toban maalmood.
Geedi socodka Soo Saarista Oyster Peptide
Waa kuwan tillaabooyinka la qaaday si looga soo saaro hilibka lohod ka ah hilibka lohod.
Tallaabada koowaad: Ku daaweynta hilibka cusbada kalsiyum
Hilibka lohodka waxaa kujira cusbo kaalshiyam ah iyo biyo. Tani waxay keenaysaa cuncun hilibka lowska ah. Tallaabada ayaa looga golleeyahay in lagu hawlgalo laguna sii daayo enzymes-ka asturaha ah ee ku jira oysters-ka. Sidaas awgeed, diyaargarowga enzymatic ee ku lug leh soo socda ee hydrolysis enzymatic hydrolysis ayaa la yareeyay.
Tallaabada 2: Enzymatic hydrolysis
Hilibka lohod-ka ee loo yaqaan 'oyster hilib' ayaa lagu soo saaray tallaabada koowaad waxaa lagu soo rogay hawo-biyoodka enzymatic Tan waxaa lagu gaaraa iyadoo lagu walaaqo qulqulka ilaa 35 ° C ilaa 45 ° C ilaa hal ama laba saacadood. Kadibna, enzyme borotiin dhexdhexaad ah ama xitaa walxaha loo yaqaan 'alkaline protease' ayaa lagu daraa qulqulka. Heerkulka ayaa loo habeeyay qiyaastii 50 ilaa 60 ° C oo loogu talagalay hydrolysis-ka inuu sii socdo shanta illaa siddeed saac ee soo socota.
Intaa ka dib, pH-ga waxaa lagu hagaajiyaa 5.0 illaa 5.5, protein dhadhanka ayaa lagu daray ka dibna enzymatic hydrolysis ayaa loo oggol yahay inuu sii socdo laba illaa saddex saacadood oo kale. Ka dib, supernernant supernetant-ka ayaa la xoojiyay si loo helo dareere loyste ah oo qalalan.
Tilaabada 3: Decoloriin iyo nadiifin
Kaarboon firfircoon ayaa lagu darayaa dareeraha oyster qasan ee la helay tallaabada labaad. Isku daridda waxaa lagu kiciyaa heerkul u dhexeeya 45 ° C illaa 55 ° C 30 ilaa 60 daqiiqo. Kadib, waxaa lagu qurxiyaa oo lagu sifeeyaa xuubka dhoobada ah. Filtrate ka soo baxa ayaa ah waxa aan u naqaanno xalka nadiifka ah ee loo yaqaan 'oyster peptide'.
Tallaabada 4: Feejignaan iyo qalajinta-buufinta
Xalka loo yaqaan 'oyster peptide' wuxuu ku urursan yahay ugu yaraan 35% maaddo adag oo loo maro xafladaha faashadda. Ka dib waa lagu qallajiyey si loo soo saaro "peystide" loyster ah oo dhadhan fiican leh oo aan lahayn ur xun.
Sida loo qaato budada Oyster peptide? Qiyaasta Oyster peptide?
Waxaad haysataa laba ikhtiyaar oo aad ku qaadan karto budada loo yaqaan 'peystide peptide'. Midka koowaad wuxuu ku ruxayaa dhalada ay kujirto xaddi macquul ah oo biyo ah iyo cabbitaanka isku darka. Bedel ahaan, waad ka qallajin kartaa ka dibna waxaad cabbi kartaa xoogaa biyo ah si aad ugu daadiso calooshaada.
Ma jiraan qaddar qeexan oo loogu talagalay peystides-ka bioyst bioactive. Si kastaba ha noqotee, qadarka celceliska ah ee dhakhaatiirta qaarkood ku taliyaan waa 500 mg, oo la qaato ilaa saddex jeer maalintii. Si kastaba ha noqotee, maxaa yeelay tani waa wax caadi ah oo guud ahaan raashin nafaqo leh, waxaad hagaajin kartaa qiyaasta kor ama hoos, iyadoo kuxiran baahiyahaaga.
Waxyeelada Oyster Peptide Side
Ma jiraan waxyeellooyin cilmiyaysan oo cilmiyaysan oo loo yaqaan 'oyster peptide' ama lowska peptide soo-baxa. Tan waxaa ugu wacan maxaa yeelay sheygu waa mid dabiici ah oo buuxda, oo aan lahayn wax ku darida waxyaabo aan dabiici ahayn ama aan ahayn.
Si kastaba ha noqotee, dadka xasaasiyadda ku leh cuntooyinka badda waxaa laga yaabaa inay la kulmaan arrimo caafimaad qaarkood ka dib markay isticmaalaan dheecaanka lohod. Sidaa darteed, qofka ku xanuunsada xasaasiyadda cuntooyinka badda waa inuu ka fogaadaa waxyaabaha loo yaqaan'yster ', oo ay ku jiraan peptide-ka.
Sidoo kale, dadka leh dhibaatooyinka caafimaad ee horay u jiray waxaa lagula talinayaa inay la hadlaan khabiiro caafimaadkooda kahor intaysan bilaabin wax soo saarka lohod. Tani waxay ka caawin doontaa iyaga inay ka fogaadaan waxyeellada ka imaan karta is-dhexgalka u dhexeeya soo-saarka oyster-ka iyo dawooyinka kale ee ay qaadanayaan.
Ka sokow, qaar ka mid ah duruufaadka caafimaad ee kabaxsan ayaa laga yaabaa inay ka sii daraan marka taranka jirka lagu daro.
Codsiga budada Oyster Peptide
Sababtoo ah saameynteeda daawada, daawada loo yaqaan 'oyster peptide budada' waxaa lagu dabaqay daawada daryeelka caafimaadka. Tusaale ahaan, xog caafimaad oo la taaban karo oo xaqiijineysa awoodda oysterku inuu ku caddeeyo mansabka nin, rag badan oo qaba dhibaatooyin caafimaad galmada ayaa adeegsada sheyga.
Intaa waxaa sii dheer, budada dabiiciga ah waxaa loo isticmaalaa habaynta lipids-ka dhiigga iyo ka-hortagga isku-darka platelet. Waxaa sidoo kale lagula talinayaa dadka leh astaamaha hyperglycemia, difaac yar ama dheef-shiid kiimikaad hooseeya maadaama ay wanaajineyso xaaladaha caafimaad.
Dadka qaba kansarka ayaa waliba u qaadan kara budo si loo maareeyo cudurka. Shayga lohod wuxuu ka hortagi karaa unugyada kansarka inuu fido. Budada waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa bogsashada dhaawaca iyo hagaajinta saameynta wadnaha iyo systolic.
Codsiyada kale ee budada loo yaqaan 'peystide peptide' waxaa ka mid ah:
Ka-hortagga walaaca fekerka
Waxqabadka bakteeriyada dila
Daawaynta cudurka qanjirka maqaarka ee la weyneeyo
Ka hortagga gabowga ee xad-dhaafka ah
Intaa waxaa sii dheer, waad isticmaali kartaa budada loo yaqaan 'peystide peptide' sida cuntada lagu daro. Waxay dhadhan fiican u leedahay umana urayo 'kalluun' sida qaar ka mid ah alaabada cunnada badda. Ka sokow, waxay hodan ku tahay nafaqooyinka jirkaagu u baahan yahay inuu ahaado mid caafimaad qaba. Sidaas oo ay tahay, waxay noqon kartaa dhammaystir wanaagsan xagga cuntadaada caadiga ah.
Peptides-ka loo yaqaan 'Oyster peptides', soo-saarka oporo, waa supplements aad u aamin ah oo loo isticmaali karo faa'iidooyin caafimaad oo kala duwan. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ayaa ah hagaajinta shaqada ragga. Peptides-kaani wuxuu kordhin karaa libido ragga qaba galmada hoose iyo tirada shahwada ee ragga leh arrimaha dhalmada. Haweenka menopausal-ka ah ee la kulma wadis galmo hooseysa iyo qallal siilka ayaa sidoo kale si weyn uga faa'iideysan kara dheecaannada oyster peptide.
Chen, D., Liu, Z., Huang, W., Zhao, Y., Dong, S., & Zeng, M. (2013). Nadiifinta iyo astaamaha astaamaha zinc-ku xidha ka soo baxa borotiinka oyster hydrolyzate. Joornaalka Cunnada Waxqabadka, 5(2), 689-697.
Qian, ZJ, Jung, WK, Byun, HG, & Kim, SK (2008). Saamaynta ka hortagga ee peptide antioxidative-ka ah oo laga nadiifiyey dheef-shiidka caloosha ee oyster, Crassostrea gigas oo ka dhan ah waxyeelada DNA-da ee xagjirnimada bilaashka ah. Teknolojiyada bioresource, 99(9), 3365-3371.
Umayaparvathi, S., Meenakshi, S., Vimalraj, V., Arumugam, M., Sivagami, G., & Balasubramanian, T. (2014). Waxqabadka Antioxidant iyo saameynta ka hortagga kansarka ee peptide bioactive ee ka yimaada hydrozamate enzymatic of oyster (Saccostrea cucullata). Biomedicine & Nafaqada Ka Hortagga, 4(3), 343-353.
Xiaochun, XIAO, Xufeng, ZHAI, Guo, X., Yongjun, LOU, & Wah, C. (2017). Codsiga Patent-ka Mareykanka ee lambarka 15 / 542,743.
Zeng, M., Cui, W., Zhao, Y., Liu, Z., Dong, S., & Guo, Y. (2008). Peptide-ka firfircoon ee fayrasku ka soo baxo lohod. Joornaalka Shiinaha ee Oceanology iyo Limnology, 26(3), 307-312.